Madaxweynaha Cusub ee dalka Zimambawe Emmerson Mnangagwa
Ku dhowaad 40 sano xukun kaligii taliye, Emmerson Mnangagwa waxaa uu wajahayaa dhibaatooyin badan oo ka jira dalka Zimbabwe isagoo ah Madaxweynaha cusub ee dalkaas.
Harare, Zimbabwe - Maalintii Arbacada, markii Labo asbuuc ka-hor uu ka baxsadey Zimbabwe,Emmerson Dambudzo Mnangagwa ayaa gaarigiisa kasoo dagey iyadoo tageerayaasha xisbigiisa ku dhawaqayaan"Garwe! Garwe!Garwe!" oo macnaheedu yahay Yaxaas, Yaxaas.
Buuqa iyo sawaxanka ayaa sii kordhey markii 75 jirkaan soo istaagey halkii uu ka hadli lahaa isagoo u sheegey tageerayaasha xisbiga ZANU-PF oo soo buux dhaafiyey xarunta uu ku leeyahay magaalada Harare in isbadal dhab ah ku sameyn doono nidaamka dowladnimo ee dalka Zimbabwe.
"Maanta, waxaan markhaati ka nahay bilowgii waqti cusub ee dimoqraadiyada Zimambwe," ayuu u sheegey kumanaan qof oo aaminsan in ninkaan cusub dalkooda u furi doono Bogg cusub ee taariikheed.
Waxaa Naaneys ahaan loogu yeeraa Madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe "Garwe", oo afka dadka ku hadla luqada Shonaha la-macno ah Yaxaas. Emmerson ayaa magacaan kala yimid 1960 markii uu kamid ahaa koox dagaal kula jirtey gumeytihii ay hurmuudka u ahaayeen cadaanka laga tira-badan yahay ee dalkaas ku nool. Emmerson Mnangagwa ayaa noqonaya Madaxweynihii Sadexaad ee dalkaas hogaamiyay tan iyo intii uu xornimada qaatey 1980.
Dadka ku hadla luqada Shonaha ayaa ah 5 qabiil oo kala dagan wadamada isku-dhow ( Afrikada Koonfureed) kuwasoo tiradooda lagu qiyaaso iney yihiin 10 milyan. Qowmiyada Shonaha oo 70% ka ah dadka ku nool dalka Zimbabwe ayaa siyaasiyiintooda ahaayeen kuwo dalka hogaamiya tan iyo inta uu xornimada qaatey 1980.
Mnangagwa- oo dhinaca kale loo yaqaan "Ngwena" magaca hogaamiyaha raxanta Yaxaaska ama qoys ka tirsan xayawankaas ayaa mar walba ahaa ninka la filayey inuu badali doona Madaxweynihii hore ee Zimabawe. Laakiin waxay xaaladu is-badashey kadib markii dagaal siyaasdeed ee kooxeysi ah ka dhex dilaacey xisbiga Zanu-PF kasoo sabatiisu aheyd cidda badaleysa Madaxweyne Robert Mugabe marka uu howl-gab noqdo. Xaaska Madaxweyne Mugabe oo iyadu rabtey iney badasho Saygeeda ayaa ku adkaatey dagaalkaas iyadoo khasabtey in shaqada laga qaado Emmerson Mnangagwa isagoo lagu khasbey in Nov 6, 2017 u baxsado dalka South Africa.
Laakiin ficil deg deg ah, oo ciidamadu sameeyeen Nov 15,2017 waxay khasabtey in Robert Mugabe ( 93 Jir) aqalkiisa xabsi gurri looga dhigo. Cadaadis kordhey kadib, Mugabe ayaa ugu dambeyntii Talaadadii lasoo dhaafey is-casiley, isagoo soo af-jarey 37 sano uu wadankaas xakumayey.
Inta uu Madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa dalkaas, Mnangagwa waxaa uu soo rogey nidaam wax looga badalayo wax-soo-saarka beeraha, kaasoo tageero kaga heley Bangiga hurumarinta Afrika, Hab-raacaan ayaa dadka Beeraleyda ka dhigaya kuwo isku-filaansho gaara mustaqbalka.
Mashruucaan oo la bilaabey hirgalintiisa Labo Sano ka hor ayaa dadka falanqeeya arimaha dhaqaalaha aaminsan yihiin in dalka Zimambawe dib ugu celinayo sumcadii aheyd in uu raashin ku quudin karo dalalka Afrika oo dhan.
Madaxweynaha cusub ayaa markii hore kamid ahaa siyaasiyiinta xisbiga ZANU-PF oo tageerey in dadka Cadaanka ee wadanka Zimababwe ku nool khasab looga qaado dhul Beereedkii ay ka dhaxleen Gumeystaha. Halka dhinaca kale la rumeysan yahay in gobolkiisa ( Zimbabwe) uu ka difaacey qaar tirsan Beerelyda Cadaanka in laga qaado dhulka ay haysteen.
Iyadoo lasoo xiganayo Xog Sireed uu arkey warsidaha Reuters, waxaa la rumeysan yahay in si dib loogu soo celiyo awoodii dhaqaale ee dhinaca wax-soo-saarka Beeraha dalkaas ayaa waxaa la rumeysan yahay iney muhiim tahay in dib loo howl-galiyo dadkii Cadaanka ahaa ee laga qaadey dhul Beereedkaan.
" Mnangagwa ayaa waqtigaan rumeysan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhaqaalaha ku tiirsan wax-soo-saarka Beeraha ee dalka Zimambawe ay tahay in dhulka dib loogu celiyo dadkii Cadaanka ahaa taasoo wadankaas ka dhigi karta wadamada ugu dhaqaale badan Afrika." sidaas waxaa qaba Xogtaan qarsoon ee la arkey.
Madaxweynaha cusub ayaa aaminsaan iney muhiim tahay in dib loo soo celiyo sumcadii dalkaas lahaa iyadoo la ilaalineyo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay islamarkaana la raacayo shuruucda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka. Ku-xigeenkii Mugabe ayaa sidoo kale qayb ka ahaa heshiisyo ganacsi uu wadankaan la galey wadamada China, Russia iyo Koonfur Afrika.
Sanadkii 2015, Mnangagwa waxaa uu hogaaminayey wafti booqasho ku tagey dalal ka tirsan Yurub kuwasoo cunaqabteyn ku soo rogey wadanka Zimababwe iyo qaar katirsan hogaamiyaasha siyaasada ee dalkaas waxaana kamid ahaa Madaxweynaha cusub.
Mnangagwa waxaa sidoo kale uu xiriir la sameystey inta uu xilka Madaxweyne ku xigeenka hayey hay'ada lacagta aduunka, diplomaasiyiin uu ku jiro safiirka dalka Ingriiska u fadhiya dalka Zimbabwe, Catriona Laing. Safiirkaan ayaa horey loogu eedeeyey in uu tageerey xisbiga mucaaradka MDC-T.
Inkastoo tageerayaal badan u ruxayeen Boorar ay ku qoran yihiin magaca hogaamiyaha cusub ee Zimambwe, kuwasoo rumeysan in isbadal uu keenayo ayaa runtu waxay tahay in Mnangagwa ka tirsan yahay siyaasiyiintii hore ee xisbiga ZANU-PF.
Tan iyo 1980, waxaa uu qabtey xilal kala duwan, kuwasoo kamid ahaayeen Wasiirka Amniga, Wasiirka Cadaalada iyo madaxa doorashada xisbiga ZANU-PF sanadkii 2008- isagoo ka caawinayey in Madaxweyne Mugabe talada dalkaas uu sii hayo.
Labada siyaasi ayaa ahaa kuwo aad isugu dhow laga soo bilaabo sanadkii 1960, markaas oo Mnangawa qoyskiisa gacanta ku hayeen Robert Mugabe oo dhalinyaro ah xiligaas oo uu macalin ka ahaa dhulka miyiga ah ee dalka Zimbabwe.
Mugabe iyo Mnangagwa ayaa saxiibtimadooda gaartey xilli ay dagaal kula jireen Gumeytihii dalkooda gacanta ku hayey in xabsi 10 sano gaaraya lagu xukumo markaas oo lagu eedeeyey iney qayb ka ahaayeen urur dagaal kala horyimid Cadaanka tirada yar ee dalkaas maamuli jirey.
Inkastoo sumcadiisa ay waxyeelo u gaysatey dagaal lagu xasuuqey mid kamid ah qabaa'ilka dalkaas wax ka daga 1980 halka dhinaca kale uu baqdin galin jirey mucaaradka, Mnangagwa ayaa Khudabdii uu jeediyey Arbacadii lasoo dhaafey ku balan qaadey in hogaamintiisa Zimbabwe ay bilaabeyso taariikh ku dhisan Dimuqraadiyad iyo is-tixgalin.
" Ma dhaceyso mar-dambe in Wadan afduub uu ku haysto Hal qof, kaasoo qorshihiisu yahay in wax walba ay ku kacdo ku dhinto isagoo xafiika jooga." ayuu yiri Madaxweynaha cusub isagoo balan qaadey in doorasho xor ah uu qaban doono sanadka soo socda.
Warsidaha Garowe Online ayaa xogtaan kasoo ururshey jaraa'idka caalamka isaga oo u suurtaglinaya akhristayaashiisa iney wax ka ogaadaan taariikhda Madaxweynaha cusub ee dalka Zimambabwe.©Xuquuda isku duba-ridkaan xogtaan waxaa iska leh GO hadaad xiganeyso kala soo xiriir contact@garoweonline.com